Distrochooser: Iyo webhusaiti iyo inobatsira iwe kusarudza iyo chaiyo GNU / Linux Distro | Kubva kuLinux
Distrochooser: Iyo webhusaiti iyo inobatsira iwe kusarudza iyo chaiyo GNU / Linux Distro
Linux Tumira Kuisa | | Noticias, Yakurudzirwa
Kune vazhinji vashandisi (vatsva kana mutsva) zvakaitika kuti pavanotanga munyika GNU / Linux sarudza kupfeka Yakakurudzirwa kana yakasarudzika distro, vane ruzivo rwakauya kwavari kubva kune mumwe munhu (s) kana nhengo (ye) yevamwe Nharaunda kana Boka kwavakabatana kana kuva.
Naizvozvo, zvinowanzoitika kuti iyo GNU / Linux Distro iyo yatinoshandisa haisi mhedzisiro yeicho chaicho nzira yekuongorora pane izvo zvatinoda, zvatinoda uye zvatinazvo. Uye ndipo pazvinouya muchiito, iyo webhusaiti ye Distrochooser.
Distrochooser Iyo yakanaka saiti kunyanya kune avo vatsva kana vashoma vane ruzivo vashandisi, sezvo ichivabatsira kusarudza iyo Kugoverwa kweGNU / Linux inokodzera kana inokodzera, zvinoenderana nezvido zvako zvinoratidzwa mune yemibvunzo yakavakwa-zvakanaka.
Dzidza nezve Mahara Software uye GNU / Linux pasina kuisa iyo
1 Distrochooser: Ndeipi yakanakisa GNU / Linux Distro kwandiri?
1.1 Nezve Distrochooser
1.2 Distrochooser inoshanda sei?
1.2.1 Ongororo yekuyedza
Distrochooser: Ndeipi yakanakisa GNU / Linux Distro kwandiri?
Zvingaite senge zviri nyore kusarudza uye kushandisa GNU / Linux Distro, asi chokwadi ndechekuti kune avo vanotanga munyika ino, kunyangwe kune avo vatove nenguva mairi, zvinowanzoitika kuti, sezvo paine sarudzo dzakawanda dziripo, vazhinji vanogona kungosarudza kushandisa Distro inozivikanwa se DEBIAN, Ubuntu, Mint, MX Linux, kana akasiyana akafanana Kuvhura, Arch kana Manjaro.
Kusvetuka nguva yekutsvaga, kuongorora uye kuyedza kunogona kubatsira kune vazhinji, asi nekushandisa Distrochooser, unogona kuwana rumwe rubatsiro, rwunofanirwa kunge usina kuita zviri pamusoro. Uye nechinangwa ichi, Distrochooser tora remibvunzo kana fomu repamhepo, remibvunzo gumi nematanhatu kutsanangura zvakanakisa GNU / Linux Distros kune mushanyi maererano nemhinduro dzavo.
Iye zvino, the Distrochooser yepamutemo saiti ine rutsigiro rwemitauro yakawanda, ndiko kuti, inouya nemutauro ChiGerman, Chirungu, Chinese, French neSpanish. Uye zvakare, ine beta saiti iri kuvandudzwa, iyo inongouya chete mumutauro ChiGerman, Chirungu uye chiItaly.
Distrochooser inoshanda sei?
Distrochooser inoita (inoratidza) a nhevedzano yezvinhu (mibvunzo / mamiriro) izvo zvatinozoona zvinotevera, uye izvo zvinofanirwa kupindurwa kana kugadziriswa, izvo zvinowanzo kufukidza zvinhu kana zvinhu, senge danho reruzivo rwemubatanidzwa Komputa, Informatics, GNU / Linux, mwero wekugona pamusoro Makomputa, Maitiro Ekushandisa uye MaApplication, pakati pevamwe vazhinji.
Tevere, isu tichaita ongororo kuti tione zvaunokurudzira maererano nemhinduro dzedu dzakapinda, kuitira kuti vamwe vakurudzirwewo kuzviita.
Kumba Screen: MuchiSpanish.
Chinhu 1: Zvimwe zvinogoverwa zvakagadzirirwa chinangwa chakakosha, zvimwe zvekushandisa kwemazuva ese. Chii chaunoda?
Chinhu 2: Ungaita sei kuyera kombiyuta yangu kuverenga?
Chinhu 3: Ungaita sei kuyera ruzivo rwangu rweLinux?
Chinhu 4: Ndedzipi sarudzo dzaunoda kuchinja panguva yekumisikidza? Mangani magadzirirwo akasiyana anofanirwa kuzadzwa neakasarudzika kukosha?
Chinhu 5: Mazhinji kugovera kunogona kubviswa kubva kuUSB kana DVD dhayeti kuyedza kugovera pasina kugadzirisa komputa yako kana kuiisa pane yakaoma dhiraivhu. Zvimwe zvinogona kuiswa padanda re USB (kuenderera kuisirwa).
Chinhu 6: Izvo zvakakosha kuti uzive kuti yakare sei iyo system nekuti kumwe kugovera hakuzomhanya pamakomputa ekare. Chikonzero chikuru cheichi kuderera kwekutsigira matekinoroji ekare, senge 32-bit processor yekuvaka mukufarira iyo 64-bit kuvaka.
Chinhu 7: Kumwe kugovera kunosarudza kugadzira zvinyorwa pawiki yemushandisi kugadzirisa matambudziko avo. Unosarudza chii?
Chinhu 8: Linux inogona kushandisa akasiyana akasiyana mushandisi maficha ("Desktops"). Kugoverwa kwakawanda kunoshandisa desktop nekutadza. Izvo zvakakosha kuti uzive kana iwe uchida yakasarudzika interface. Zvakadaro, iwe unogona kushandura uye nekuisa matsva ematafura chero nguva.
Chinhu 9: Mazhinji ekugovera ari mahara. Kumwe kugovera kunopa kumwe kutsigirwa kwemubhadharo wekutanga.
Chinhu 10: Kugovaniswa kwakasiyana kunoisa zvirongwa zvakasiyana, vamwe vanoisa zvakakwana kuti utange ipapo ipapo. Zvimwe zvinongopa zvekutanga zvekuisirwa, saka zviri kumushandisi kusarudza zvekuisa.
Chinhu 11: Iyo rezinesi (ideology) yekuparadzira ndeyekupokana kuri kuenderera. Vamwe vanongopa mahara software, vamwe vanobvuma isiri-yemahara software. Marezinesi emahara anotendera mushandisi kugadzirisa, kugovera patsva uye kushandisa software sezvavanoona zvakakodzera. Pane mamiriro ezvinhu apo kugoverwa kunofanirwa kushandisa isiri-yemahara software, semuenzaniso, kune madhiraivha. Isina-yemahara software haibvumidze shanduko kana kuongororwa kwekodhi. Izvo zvakakosha kuti uzive kana iwe uine chero zvaunofarira nezve akasiyana marezinesi mamodheru.
Chinhu 12: Zvimwe zvekugovera zvinoshandisa masevhisi epamhepo kuvandudza ruzivo rwevashandisi. Izvi zvinogona kukanganisa kuvanzika kwemushandisi, mushandisi anogona kuteverwa kana achishandisa zvinhu zvakadaro.
Chinhu 13: Kumwe kugovera kunopa yavo madingindira uye maoniki kugadzira iyo yakazara mushandisi ruzivo.
Chinhu 14: Zvimwe zvekugovera zvinogona kushandisa zvakasarudzika maficha, senge ekuchengetedza ekuvandudza. Ndeipi yezvinhu zvinotevera zvandinoda kushandisa (kana paine)?
Chinhu 15: MuLinux unogona kuisa software nenzira dzakasiyana. Iwe unogona kuumbiridza software kubva kunobva kodhi kana kuiisa kuburikidza nemapakeji. Unosarudza chii?
Chinhu 16: Zvimwe zvekugovera zvinopa zvinowedzerwazve kugadzirisa, izvo zvinogona kukanganisa kugadzikana kwesisitimu. Unosarudza chii?
Mhedzisiro yebvunzo: Iwo maDistros akakurudzirwa naDistrochooser akavakirwa pamhinduro dzakapinda aive:
Muchidimbu, iwo akapihwa kwandiri dzimwe nzira dzakanaka. Nekudaro, ini ndinosarudza kuramba ndichishandisa yangu yetsika uye yakagadziridzwa vhezheni ye MX Linuxkufona Zvishamiso.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" pawebhu «Distrochooser», ino saiti yakanakisa kunyanya yeavo vatsva kana vashoma vane ruzivo vashandisi, sezvo ichivabatsira kusarudza iyo Kugoverwa kweGNU / Linux inokodzera kana inowirirana zvinoenderana nezvaunoda; kuva zvakawanda kufarira uye kushandiswa, Zvese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Distrochooser: Iyo webhusaiti iyo inobatsira iwe kusarudza iyo chaiyo GNU / Linux Distro
LXQt 0.15.0 yatove pano yaunzwa akasiyana ekuvandudza uye shanduko dzakakosha
Iyo yekupedzisira beta yeSnort 3, network network yekutsvagisa system, yakatoburitswa